के तपाई मोटी केटीसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? हो भने तपाईलाई फाइदै-फाइदा – rastriyakhabar.com
के तपाई मोटी केटीसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? हो भने तपाईलाई फाइदै-फाइदा
एजेन्सी । अहिले त ट्रेन्ड नै चलिसकेको छ कि, पातलो ज्यान भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्यान भएकी केटी नै पर्छिन् । तर मोटी केटीका पनि केही गुणहरु हुन्छन्, जुन सुन्दा तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग बिवाह गर्न मनाही गर्नुहुने छैन ।